नायिका रेखा थापा माओवादीबाट राप्रपा प्रवेश (तस्बिरमा) - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
नायिका रेखा थापा माओवादीबाट राप्रपा प्रवेश (तस्बिरमा)
आवाज संवाददाता २७ मंसिर २०७३, सोमबार
काठमाडौं, २७ मंसिर । चर्चित नायिका रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा प्रवेश गरेकी छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रमकाबीच आमा सरस्वती थापासहित रेखा राप्रपामा प्रवेश गरिन् ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले टीका लगाएर आमाछोरीलाई नै पार्टीमा स्वागत गरे ।
करिब ५ वर्षअघि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हालको नेकपा माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेकी थापा केही समयदेखि निस्क्रियजस्तै थिइन् । त्यतिबेला प्रचण्डसँग कम्मर मर्काएर नाचेकी रेखाले सोमबार एक्कासी राप्रपामा प्रवेश गरेर धेरैलाई अचम्मित तुल्याएकी छन् ।
आफूलाई अग्रगामी दावी गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर पुरातनवादीको आरोप लाग्ने पार्टीमा किन त ? जवाफमा रेखा आफू धर्मकर्ममा विश्वास राख्ने हिन्दू नारी भएको र शुभचिन्तकहरुले पनि विचारचाहिँ किन फरक भनेर प्रश्न गर्ने गरेकाले राप्रपामा प्रवेश गरेको बताउँछिन् ।
जवाफ उनकै मुखबाट ।
”हरेकको मानसपटलमा एक प्रकारको प्रश्नवाचक चिन्ह उब्जिरहेको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ । यो के भयो भन्ने प्रकारको महशुस तपाईंले गरिरहनु भएको छ होला, त्यो कुराको म अनुभूत गर्न सक्छु ।
पत्रकार मित्रहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ रेखा थापाको विषयमा, मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन होला । तपाईंले मेरो चलचित्रको इतिहास हेर्ने हो भने पनि पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पनि रेखा थापा आज जुन मञ्चमा उपस्थित भएकी छे, जुन पार्टीमा आवद्ध भई, मैले किन भई, के कारण भई भन्ने कुराको उत्तर दिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरा विगतका चलचित्रहरु र अहिलेका चलचित्रहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । म कहिले दुर्गा बनेर, कहिले काली बनेर, कहिले रामप्यारी बनेर अन्याय/अत्याचारकाविरुद्ध एउटा देवीको रुप धारण गरेर चलचित्रमा हुने, पर्दामा हुने अन्याय अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेँ । यो कुरा चलचित्रको पर्दामा मात्र सिमित भएको मेरा दर्शक, मेरा शुभचिन्तकहरुलाई पाच्य भएन ।
समाजसेवाका लागि म जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि प्रत्येक जनताबाट म प्रतिको आशा र म प्रतिको भरोसा जुन चलचित्रको पर्दामा थियो, एउटा नेतृत्व गर्ने क्षमता भएकी नायिका या नायक यसले समाजलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छे, हाम्रो रक्षा गर्न सक्छे, राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछे, धर्मको कुरा उठाउँछे, तर विचार अलिकति पर भएको हो कि ! भन्ने प्रकारको प्रश्नवाचक चिन्न उठेको पाएँ ।
म विगत ४ वर्षदेखि अध्यन मै थिएँ । गहिरो अध्ययन गरेँ । क्रियाकलापलाई नजिकबाट मध्यनजर गरेँ । तपाईंहरुलाई लाग्ला रेखा थापा किन राप्रपामा ? म एउटा हिन्दू नारी हुँ । राष्ट्रवादी केटी हुँ ।”